SO Website Redesign Discovery Survey Results | The Seattle Public Library
Dib u naqshadeynta Websaydka SPL | Natiijooyinka Xog qaadista
Seattle Public Library waxay kuu horumarinaysaa websaydkeeda adiga. Si loo hubiyo inaan dib u naqshadeyneyno bogga internatka si ay u buuxiso baahiyadaaga, waxaan hadeer sameynay xog qaadista isticmaalaha.
Ujeedada xog qaadistan waxay ahayd barashada wax badan oo ku saabsan qofka hadeer isticmaalayo bogga internatka iyo waxa illaha onleenka ay inta badan waxtar u leeyihiin iyaga. Waxay sidoo kale siisaa aragtida cida ah inaysan ka warqabin illaha Maktabada. Waxaa isticmaali karnaa midaan sida aasaaska isbarbardhiga kadib markii bogga internatka dib loo naqshadeeyay la bilaabo.
In ka badan 8,000 qof ayaa dhammeystirtay xog qaadista, kaas oo weydiiyay 10 su'aalo oo wuxuu furnaa laga bilaabo Oktoobar 11-25, 2016. Ka qeybqaatayaasha waxaa lloo qortay qaabab badan, oo ay ku jiraan agabka laamaha Maktabada, fariimaha lagu dirayo liisaska, akhbaarta warbaahinta bulshadda ee Facebook iyo Twitter iyo ogeysiiska bogga spl.org. Tani waxay aheyd fursadaha ugu horeeyay ee ugu badnaa ee bulshadda si ay uga qeybqaataan mashruuca.
Ku soo dhawow inaad jawaab ka bixisid xili walba adiga oo isticmaalaya "Wadaag Afkaarahaaga" foomka jawaabta ee spl.org/websiteredesign.
Waxaan rabnaa inaan ku soo ogeysiino waxa aan ka baranay nidaamnka oo dhan. Waxaas hoos lagu tilmaamay natiijooyinka xog qaadista oo kooban.
Jawaabaha labbada su'aalo ee ugu horeeyp waxay na tusayaan in kuwa ugu badan ee kuwa dhammeystiray xog qaadista ay yihiin isticmaalayaal joogta ah ee Seattle Public Library-onleenka, oo qof ahaan ama labbadaba.
Intee jeer ayaad timaadaa mid ka mid ah goobaheena?
Qiyaastii 65% ee kuwagalay xog qaadista waxay yimaadaan ugu yaraan hal jeer sannadkii.
Intee jeer ayaad isticmaashaa websaydka Seattle Public LibrarySeattle Public Library (spl.org)?
In ka badan 75% ee kuwa galay xog qaadista waxay isticmaalaan ugu yaraan haljeer bishiiba. Waxaan ku soo gebagabayn karno jawaabahoodu waxay ee matalaan isticmaalayaasha websaydka hadda. Cilmi baaris dheeraadka ah waxay nagu caawin kartaa fahamka baahiyada kuwa aan hadda isticmaalayn websaydka.
Aayaanad u isticmaalin websaydka Seattle Public Library (spl.org) inta badan?
Kuwa ku jawaabay inay isticmaalaan websaydka haljeer sannadkiiba ama ka yar waxaa la weydiiyay su'aal sadexaad oo ku saabsan sababta aysan u isticmaalin inta badan. Kuwa badan ayaa ku jawaabo "wax kale," iyo waxaan jeclaan laheyn inaan ogaano sababta. Haddii aad jeclaan laheyn inaad nala wadaagtid sababaha aanad u isticmaalin spl.org, fadlan isticmaal foomka jawaabta. Waxaan qorsheyneynaa inaan la sameyno cilmi baaris dheeraad ah macmiisheena, oo ay ku jiraan wareysiyada qof ahaaneed ee qaar ka mid ah laamaheena si markaas si wanaagsan loogu fahmo sida dadka u isticmaalaan (ama sababta aysan u isticmaalin) websaydkeena.
Labbada su'aalo ee xigga waxay sheegayaan sababaha macmiisha booqashada ugu dambeyso spl.org, iyo halka ay u suurtogaleyso inay helaan waxa ay raadinayeen. Guud ahaan, dhammaan waxaa awoodeen inay helaan waxa ay rabaan, laakiin waxaa jira meel u banaan horumarka ee ka dhigida waxyaabaha in si ka fudud loo helo.
Maxay aheyd sababta ugu muhiimsan ee booqashadaada waqtigii ugu dambeysay ee aad isticmaashay spl.org?
Waan ognahay marhore in macaamiil badan ee Maktabada ay si toos ah u dhaxgalaan liiska buuxo ama barnaamijyada si markaas hayno loogu meeleeyo, looga dajisto e-books iyo noocyada kale ee wax is dhaafisga ah. Su'aasha xigta, waxaan bixinay liis shaqooyin ah ee lagu sameyn karo dhinaca spl.org.
Shan sababo ee ka hartay inta kale, xisaabinta ku dhawaadkii 80% ee jawaabaha, iyada oo in kabadan 12% jawaabeen "wax kale." Hadii aad jeclaan laheyd inaad wax badan nooga sheegtid qaababka aad u isticmaashid spl.org, fadlan isticmaal foomka jawaabka.
5-ta sabab ee ugu sareeyo booqashada spl.org:
Isticmaal illaha onleenka Maktabada
Macluumaadka ku saabsan goobaha Maktabada
Raadi talo bixinta buugga ama filimaanta
Ku caawi e-books iyo dajisanada
Hel dhacdooyinka Maktabada ama fasalada
Ma heshay waxaad rabtay?
Iyada oo dadka inta badan ay awood u yeesheen inay ka helaan waxay ka raadinayeen spl.org, waxaa jiro dhowr aagag oo u muuqdo inay aad u yara adagyihiin: macluumaadka ku saabsan isticmaalida maktabada, adeegyada maktabada ee carruurta, u diyaarinta qolka kulanka, ku caawinta raadinta shaqo, ku caawinta soo jeedinada e-books ama filimka, ku caawinta ebooks iyo ka dajisashada iyo isticmaalida illaha onleenka maktabada.
Waaya aragnimada Isticmaalaha
Qeybta xigta ee su'aalaha la weydiiyay fikradaha guud ee bogga internatka, ee diirada saareyso afar aag: sida sahlan ee lagu helayo macluumaadka, sida sahlan ee ay tahay macluumaadka lagu fahmayo, caawimo buuxdo leh iyo waaya aragnimada guud ee isticmaalida bogga internatka. Websaydka wuxuu helay buundada wanaagsan ee caawinta buuxdo iyo waaya aragnimada guud, iyo meesha u banaan horumarinta sida sahlan ee macluumaadka lagu helayo oo lagu fahmayo.
Sidee sahlan ayaa looga helayaa macluumaadka spl.org?
Iyada oo ka badan 60% ee dadka galay xog qaadista waxay dhaheen wuu sahlanyahay ama aad ayey u sahlan tahay in laga helo macluumaad spl.org, jawaabaha Su'aasha 4 waxay tilmaameysaa dhowr aag oo hormarin ah.
Waxaan sidoo kale helnay dhowr faalooyin oo dhinaca foomka jawabta in macluumaadkaa ay caqabad tahay in la helo:
"Bogga hore wuu buuxaa iyo aragti ahaan way ku adagtahay in la jaheeyo. Waxaa jiro macluumaad badan, laakiin way adagtahay in la helo."
"Way adagtahay in la helo wax, maaha wax dareen kua buuran sida ay noqon lahayd. Waxyaabaha inta badan waxaa la dhigaa hoosta ciwaano/qeybo hoose oo badan. Waxaan inta badan ku kufay waxyaabaha oo dhahaa 'wow, ma ogeyn midaas' laakiin kadib iloobay halka aan ka helay iyaga."
Waa macluumaadka spl.org sahlan tahay in la isticmaalo?
Iyada oo ku dhawaadkii 75% ee kuwa galay xog qaadista way u sahlanaataa ama aad ugu sahlanaataa fahamka macluumaadka spl.org.
Waa macluumaadka spl.org caawimada leh?
In kabadan 87% ee dadka galay xog qaadista waxay ka helaan macluumaadka spl.org mid caawimo leh ama aad u caawimo badan.
Guud ahaan, sidee ayaad ugu qiimeyn laheyd waaya aragnimadaada spl.org?
Iyada oo in kabadan 75% oo dadka glay xog qaadista waxay ku qiimeynayaan waaya aragnimadooda sida wanaagsan ama aad u wanaagsan, dad badan waxay isticmaaleen foomkeena jawaabta si ay u codsadeen in aan sameyno booga internatka mid u sahlan in lagu isticmaalo qalabyada mobeelka.
"Fadlan ka dhig dib u naqshadeynta websaydka maktabada (dhinacyada isticmaalka xogta iyo waqtiga buuxinta in kabadan 3G) iyo mobeel-ku haboon (jawaab ah)."
"Waxaan inta badan ka isticmaalaa www.spl.org iPhone-keyga, iyo websaydka haddda ma aha mid mobeel ku haboon."
Saameynta dadaalka si markaas si wanaagsan loogu fahmo luuqadaha macmiisha isticmaalaan, xog qaadistan waxay ka koobantahay tiro su'aalaha oo ku saabsan luuqadaha. Intaa waxaa dheer, xog qaadista waxaa lagu helayaa todoba luqaddo ah: Ingiriis, Amxaari, Shiinees, Raashiyaan, Soomaali, Isbaanish iyo Fiitnaamiis. Shaqaalaha la shaqeeyay jaalalka bulshaddeena si ay u gaaraan bulshadad halka Ingiriiska lagaga hadlo sida luqadda labbaad, si kastaba ha ahaatee xog qaadista waxaa ugu horayn lagu horumariyaa dhinaca kanaalada xiriirka luuqada Ingiriiska ee jirtay.
In kabadan 90% ee jawaabayaasha waxay ka warbixiyeen aad raaxo u leh iyo tusmooyinka websaydka Ingiriiska, iyo kuwa kale 5% yara raaxo leh. Wax ka yar 1% ayaa soo wargeliyay inay midkood an raaxo lahayn ama aan raaxolahayn gabi ahaanba boggagaan.
Sidee ayay raaxo kuugu tahay isticmaalka luuqada Ingiriiska?
In kabadan 90% oo dadka galay xoqg qaadista aad ayay uraaxo ugu tahay isticmaalida bogga luqadda Ingiriiska ee spl.org. Si kastaba, 1,050 dad (13%) ayaa ka warbxiyay inay ugu hadlaan luuqad aan aheyn Ingiriis guriga.
Waxaan sidoo kale helnay dhowr faalooyin ah oo ku saabsan muhiimada qoraalka la turjumay:
"Haddii horumarka bogga webka ay ka dhigi karto mid aad ay u isticmaali karaan dadka ku qabo dhibaatooyinka Ingiriisigu, waxaan u maleynayaa inay wanaagsantahay isticmaalid waxoogaa lacag."
"Waxaan la yaabaa haddii websaydka lagu muujin karo luqado kala duwan; waxaan leenahay dad badan oo magaalada joogo oo ka kala yimid wadamo kala duwan."
Sidee ayay waxtar u lahayd turjumaada tooska ahi?
Marka la weydiiyay isticmaalka qalabyadaturjumaada tooska ah, qiyaastii 80% waxayka warbixyeen helida qalabyadaan aad caawin u leh ama yara caawimo leh.
Isticmaalka qalabyada caawimada leh
Waxaan rabnaa inaan fahamno sida aan u caawin karno araga, maqalka, maskaxda ama curyaannimada dhaqdhaqaaqa ee isticmaalka bogga. Marka la weydiiyay haddii ay u baahanyihiin farsamada caawimada si ay ugu galaan intarneetka, 1.2% ayaa ku jawaabtay haa. In dheeraad ah1.2% ayaa ku jawaabay ma garanayaan. Waxaan fileynay heerka jawaab hoose ee qeybtan oo ku saleysan qeybinta iyo naqshada xog qaadista. Dadaalo dheeraad ah way socdaan si ay ula shaqeyso isticmaalayaasha Library Equal Access Program si aad markaas si wanaagsan ugu fahamto baahiyada helitaanka shaqsiga.
Gudaha Janaayo 2017, shirkada naqshadeena <do not translate>(Domain 7) </do not translate> waxaa bilaabaneysaa macloomaadka dhismaha iyo shaqada nashqada shaqada qaabdhismeedka iyo naqshada. Shaqadan waxay nagu caawineysaa go'aaminta sida macluumaadka loogu habbeeyo bogga internatka. Xog qaadistan waa mid ka mid ah qalabyada cilmi baarista badan si ay kuugu caawiso jaheynta go'aamadeena oo illaa nidaamkaan oo dhan ah.
Waxaan sii wadeynaa inaan kaala qeybgalno howlaha wacyigelinta oo taxana ah oo wargelin doonta dib u naqshadeynta websadka. Hadda, waxaan ku ururinaynaa tallada oo dhexda sanduuqyada faalooyinka ee laan kasta oo maktabada iyo warbaahinta bulshadda ah. Waxaan sidoo kale sii wadeynaa inaan gaarno inaan la soo xiriirno bulshooyinka in aanan weli ka maqlin, sidoo kale sida soo ururinta jawaab dheeraad ah oo lagu wargelinayo wajigaan mashruuca.
Haddii aad jeclaan laheyd inaad ka qeybqaadatid cilmi baarista mustaqbalka, fadlan isticmaal foomkaan si ay noo ogeysiiso oo iska hubi inaad ku dartid ciwaanka i-meelkaaga.
Booqo spl.org/websiteredesign si aad uga warhaysid dib u naqshadeynta websaydka. Iyo fadlan "Wadaag Afkaarahaaga" adiga oo isticmaalayo ciwaanka boggaas. Waan dhageysaneynaa.